SOO SAARKA HYDRANT waalka Shirkadaha iyo Warshadaha - Shiinaha
2 way dabka dhaliyaha
Sharaxaad: 2 Way Fire (Tiir) Hydrants waa hawo qoyan oo foosto ah si loogu isticmaalo adeegga bixinta biyo bixinta meelaha ka baxsan meelaha ay cimiladu ku fududahay iyo heerkulka qabow ee aan ka dhicin. Fiilooyinka-foosto-qoyan waxay leedahay hal ama in ka badan furitaanka waalka korkiisa dhulka hoostiisa iyo, xaaladaha caadiga ah ee ay ku shaqeeyaan, dhammaan gudaha hawo-mareenka waxaa saaran cadaadis biyo mar walba. Furayaasha Muhiimka ah ee Gaarka ah: ● Waxyaabaha: Birta loo tuuray / Birta Dutile let Gudaha: 4 "BS 4504/4" miiska E / 4 "ANSI 150 # ● Meel: 2.5" femal ...
Waalka xagalka midig ee marinka
Faahfaahin: Farsamooyinka xagasha midig ee marinka waa nooc ka mid ah hawo-qaadaha hawo-qaateyaasha adduunka. Noocyada noocan oo kale ah waxaa lagu heli karaa iyada oo laga soo galo ama la gashado oo waxaa loo soo saaray si ay ugu hoggaansamaan heerka badda. Fiilooyinka xagalka waxaa lagu kala saaraa cadaadis hooseeya waxayna ku habboon yihiin in loo isticmaalo cadaadiska soo-galista magac ahaanta illaa 16 baararka. Dhameystirka tuubada gudaha ee waalka kasta waa mid tayo sare leh oo hubinaya xaddidaad socodka qulqulaya oo buuxiya heerka looga baahan yahay tijaabada socodka socodka biyaha.
Sax waalka malag
Faahfaahin: Xaga Xirfadaha Soo Degida waa nooc ka mid ah waalka hawo-qaadaha hawo-qaadaha. Noocyada noocan ah ee xagasha soo dhaca waxaa lagu heli karaa lab ama dhedig banaanka waxaana loo soo saaray si ay ugu hogaansamaan heerka FM&UL Heerarka soo degida xaglaha waxaa lagu kala saaraa cadaadis hoose waxayna ku habboon yihiin in loo isticmaalo cadaadiska magaca laga soo galo ilaa iyo 16 baararka. Dhamaystirka gudaha ee waalka kasta waa mid tayo sare leh oo hubinaya xaddidaadda socodka qulqulka oo buuxiya shuruudaha tijaabada socodka socodka biyaha.Waxaa jira laba ...
Fur fur waalka
Sharaxaadda: Oblique Landing Valve waa nooc ka mid ah waalka hydrant hydrant hydrant. Noocyadan qasabka ah ee soo degsada waxaa lagu heli karaa iyada oo laga soo galo ama la gashado oo la jeexjeexay waxaana lagu soo saaray inay u hoggaansamaan heerka BS 5041 Qaybta 1 oo leh isku xirka tuubbada gudbinta iyo daboolka maran ee u hoggaansamaya heerka BS 336: 2010. Farsamooyinka soo degaya waxaa lagu kala saaraa cadaadis hoose waxayna ku habboon yihiin in loo isticmaalo cadaadiska soo-galista magac ahaanta illaa 15 baararka. Dhammaystirka gudaha ee waalka kasta waa mid tayo sare leh oo hubinaya ...
Flange waalka dejinta
Faahfaahin: Flange Landing Valve waa nooc ka mid ah waalka hawo-qaadaha hawo-mareenka. Noocyadan qasabka ah ee soo degsada waxaa lagu heli karaa iyada oo laga soo galo ama la gashado oo la jeexjeexay waxaana lagu soo saaray inay u hoggaansamaan heerka BS 5041 Qaybta 1 oo leh isku xirka tuubbada gudbinta iyo daboolka maran ee u hoggaansamaya heerka BS 336: 2010. Farsamooyinka soo degaya waxaa lagu kala saaraa cadaadis hoose waxayna ku habboon yihiin in loo isticmaalo cadaadiska soo-galista magac ahaanta illaa 15 baararka. Dhammaystirka gudaha ee waalka kasta waa mid tayo sare leh oo hubinaya hooseeya ...
Flange waalka yareynta cadaadiska
Faahfaahin: Nooca Flange cadaadiska yareynta cadaadiska waa nooc ka mid ah cadaadiska nidaaminaya waalka biyaha. Falkeliyayaashan waxaa lagu heli karaa marinka flanged ama galdaloolo waxaana lagu soo saaray inay u hogaansamaan heerka BS 5041 Qaybta 1 oo leh isku xirka tuubada gudbinta iyo daboolka maran ee u hogaansamaya heerka BS 336: 2010. Farsamooyinka soo degaya waxaa lagu kala saaraa cadaadis sarreeya waxayna ku habboon yihiin in loo isticmaalo cadaadiska soo-galista magac-ahaanta illaa 20 baararka. Dhammaystirka gudaha ee waalka kasta waa mid tayo sare leh oo hubinaya hooseeya ...